नाकमा आएको डण्डीफोर नि चो रेपछि अहिले उनको अनुहार सु न्नि एर बेलून जस्तै!! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /रोचक/नाकमा आएको डण्डीफोर नि चो रेपछि अहिले उनको अनुहार सु न्नि एर बेलून जस्तै!!
फिलिपिन्सकी एक किशोरी मेरी यान रेगा चोले नाकमा आएको डण्डीफोर नि चो रेपछि अहिले उनको अनुहार सु न्नि एर बेलून जस्तै भएको छ । नाकको छेउमा आएको सानो डण्डीफोर नि चो रे पछि सुन्निँदै गएको र अनुहारभरि फैलिँदै गएको हो । र अहिले आँखा समेत हेर्न गाह्रो परेको छ ।
मेरीको नाकमा डण्डीफोर लामो समयदेखि थियो र उनले हर्मोनका कारण त्यसो भएको ठानिन् । पोहोर सालमा मात्र उनले छोरो जन्माएकी थिइन् । गर्भवती भएपछि छालामा समस्या आउने उनलाई थाहा थियो । अति नै भएपछि उनले डण्डीफोर नि चो रिन् । त्यसको केही दिनपछि उनलाई अलिअलि दुख्न थाल्यो र बिस्तारै दुखाइ बढ्दै गयो र अनुहार सुन्निन थाल्यो । उनले यसलाई रोक्न आयुर्वेदिक उपचार गरिन् तर त्यसको कुनै असर परेन ।
उनका श्रीमान “अल्बर्ट सालेस” छिमेकीको घरमा पार्टटाइम काम गर्छन् । उनीहरूको कमाइ थोरै भएकाले स्वास्थ्य उपचार गराउन सकिरहेका छैनन् । जिन्दगीभरि सुन्निएको अनुहार लिएर बस्नुपर्ने भयो भनी रेगाचोले पीर मानेकी छन् । डेकिमेल ले सार्वजनिक गरेको उनको भिडियो ।